Suavecito - Firme Hold Pomade | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Best Sellers › Suavecito - Firme HOLD Pomade
Regular price MMK 36,000
Normal Size (4oz/113g) - MMK 36,000 MMK3x Normal Size (4oz/113g) - MMK 106,000 MMK Big Size (32oz/904g) - MMK 229,000 MMK
--Strong Hold | Medium Shine | Water-Based Pomade--
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသုံးအများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူရုံသာမက ဆံပင်ကို အကောင်းဆုံး Strong Hold ထိန်းအားနှင့် တောင့်တောင့်တင်းတင်း ပုံကျနေေစေကာ အနေတော်တောက်ပြောင်မှု Medium Shine နှင့် ချောချောမွေ့မွေ့ပုံသွင်းလိုသူများအတွက်...
Suavecito Firme Hold Pomade သည် ကမ္ဘာကျော် လူကြိုက်အများဆုံး အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Suavecito - USA မှထုတ်လုပ်ထားသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသုံးအများဆုံးအဖြစ် လက်ခံထားသော အမျိုးသားခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။ ထိန်းအားအလွန်ကောင်းရုံသာမက ဆံပင်ထူသူများ၊ ဆံပင်ကြမ်းသူများအတွက်လည်း လွယ်လွယ်ကူကူပုံသွင်းစေနိုင်မည့် Water Based Pomade အမျိုးအစား ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
ဆံပင်ကို ခြောက်သွေ့သွားခြင်းမရှိပဲ ချောချောမွေ့မွေ့ပုံသွင်းရလွယ်ကူစေပြီး၊ စိုစိုတောင့်တောင့်ဖြင့်ပုံကျနေစေကာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြသော ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
အနေတော်ဆံသားတောက်ပြောင်စေမှု Medium Shine
ရေနှင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ဆံပင်ပြန်ပြင်နိုင်
This isaseriously strong and powerful water-based hair styling product. Works into your hair with ease and keeps you fresh all day with Suavecito's signature masculine cologne scent. It is an all rounded, versatile andastaple pomade. You can count on it whenever the time comes.
Sets Your Hair For the Whole Day
Re-style and reactivate with water